कोरियामा कोरोना त्रास- विश्व - कान्तिपुर समाचार
थेगु सहरमा मात्रै २ सय २९ संक्रमित, जहाँ करिब ७ हजार नेपाली छन्
फाल्गुन ११, २०७६ गोकुल थोकर
सोल — दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलदेखि ३ सय किलोमिटर दक्षिणको ख्याङसान क्षेत्रमा पर्छ थेगु सहर । यही सहरमा काम गर्ने आङपासाङ शेर्पा केही दिनयता निकै बेचैन छन्, कारण सहरमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण ।कोरियाको चौथो ठूलो सहर थेगुमा विभिन्न कम्पनीहरू छन् ।
कामका लागि कोरिया पुगेका विभिन्न देशका कामदारको यहाँ उल्लेख्य उपस्थिति छ । तर थेगुमा केही दिनयता ह्वात्तै फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण ती कामदार त्रासमा बसिरहेका छन् ।
थेगुमा शनिबार मात्रै २ सय २९ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरियामा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ सय ३३ पुगेको छ । थेगु नजिकैको छाङदोको छाङदो थेनाम अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना अस्पतालका कर्मचारी र १ सय २ जना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । थेगु र छाङदोमा मात्रै ३ सय ५३ संक्रमित छन् ।
भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि थेगु आसपासका कम्पनीले कामदारलाई बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । थेगुमा झन्डै २५ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । थेगु र आसपासका क्षेत्रमा ७ हजार नेपाली ईपीएसमार्फत काम गरिरहेका छन् । भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सहरमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको थेगुमै काम गरिरहेकी पार्वती वाइबाले बताइन् । ‘हामीआज धेरै दिनपछि तरकारी किन्न निस्किएका थियौं । भनेजस्तो सामान नै नपाउने । पाउरोटीहरू पनि छैनन् । जे भेट्टायो त्यही लिएर आयौं । पहिलाजस्तो बजारमा सामान नै छैन,’ उनलेगुनासो गरिन् ।
वेल्डिङको काम गर्ने शेर्पा दुई सातादेखि कम्पनीभित्रैको कोठामा सीमित छन् । ‘केही समयअघिसम्म फुर्सदका बेला घुम्न निस्किन्थें । साथीभाइसँग रमाइलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नेपालीहरूसँग मनका कुरा गर्दा कम्पनीको कामको दुःख बिर्सन्थें ।’ तर उनको फुर्सदको समय हाल केही फेरिएको छ । उनले केही खान मन लाग्यो भने कम्पनीमै भन्छन् । ‘यसो सोच्छु सुरक्षा अपनाउने आफ्नै लागि हो । केही समयपछि ठीक होला नि ?’ उनले आशा मारेका छैनन् ।
थेगु मात्रै होइन कोरोनाको त्रास भने कोरियाभरि नै उस्तै छ । छुङछन नाम्दोमा काम गर्ने रामजी श्रेष्ठलाई पनि कम्पनीले बाहिर निस्कन बर्जित गरेको छ । ‘जताको समाचार सुन्दा पनि डर लाग्दो छ । हाम्रोतिर संक्रमित त भेटिएको छैन । तर नजिकैका फेन्थेक, सुवनतिरका मानिसमा संक्रमण भेटिएकाले अलि संवेदनशील बनेका होलान् ।’ केही कम्पनीले बिहान र बेलुकी ज्वरो नाप्ने नियम बनाएका छन् । मास्क प्रयोगमा पनि कम्पनीले कडाइ गरेका छन् । कम्पनीमा बाहिरी मानिसको आवतजावत भने बन्दजस्तै छ ।
सार्वजनिक स्थान शान्त
हरेक शनिबार बिहान निकै व्यस्त रहने इन्छन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा मानिसहरू नगन्य मात्रामा देखिन्थे । कोरिया आउने र अन्य स्थानमा जाने यात्रुहरू खासै देखिएनन् । यात्रुहरूभन्दा बढी विभिन्न एयरलाइन्सका कर्मचारीको संख्या बढी देखिन्थ्यो । अति आवश्यक पर्दा मात्रै घर बाहिर निस्कन, अनिवार्य मास्क लगाउन तथा ३० सेकेन्डभन्दा बढी समय मिचेर हात धुन अनुरोध गरिएका सूचना रेल, गाडी र सार्वजनिक स्थल तथा सञ्चारमाध्यममा पनि छ्यापछ्याप्ती छन् ।
रेल स्टेसन, सार्वजनिक शौचालयमा हात धुनका लागि विशेष खालका साबुन राखिएका छन् । नेपाली जम्मा हुने सोलस्थित दोङदेमुनका नेपाली रेस्टुरेन्ट शून्य छन् । निक सेकुवा कर्नरका ध्यान राईले कतिपय कम्पनीका नेपालीलाई मागअनुसार कम्पनीमै खानेकुरा पठाउने गरेको बताए ।
ईपीएसबाट आएकाको भिसा ५० दिन थपिने
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै ईपीएसमार्फत कोरिया आउनुपर्ने धेरै विदेशी कामदार आएका छैनन् । यहाँ भएका कामदारको भिसा अवधि सकिएर देश फर्कनुपर्ने भएपछि सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ । न्याय मन्त्रालयको शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकले अदक्ष कामदारका रूपमा आएका विदेशीको भिसा ५० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विदेशी कामदार अब ४ वर्ष १० महिनापछि पनि थप ५० दिन बस्न पाउने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कामदारले नजिकैको अध्यगमन कार्यालयमा वा अनलाइनमार्फत फारम भरेर भिसा अवधि थप गर्न सक्नेछन् । प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०७:०३
‘चिकित्सा पर्यटन विकास गर्न सहकार्य आवश्यक’
फाल्गुन १०, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेपालमा चिकित्सा पर्यटनको सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले चिकित्सा पर्यटन विकासका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति, प्राविधिक सहकार्य, प्रशिक्षण तथा फेलोसिप कार्यक्रमको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।
जोर्नी प्रतिस्थापन शल्यक्रियाका विषयमा भारत अहमदावादको शाल्बी अस्पतालको अनुभव सुनाउन काठमाडौंमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल टुरिज्म अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष तथा एक्स्प्लोर हेल्थकेयर प्रालिका प्रबन्धक निर्देशक कृष्ण पाण्डेले चिकित्सा पर्यटनको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालहरूसँग सहकार्य र लगानीको खाँचो रहेको बताए ।
शाल्बीका वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डा. कल्पेश शाहले नेपालका अस्पतालसँग सहकार्य, समन्वय गरी अति विशिष्ट सेवा विस्तार गर्न आफूहरू उत्सुक रहेको जानकारी गराए ।शाल्बीका निर्देशक डा. भरत गज्जरले पनि नेपालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क तालिम, अस्पतालको क्षमता वृद्धिका लागि प्राविधिक लगानीका लागि आफूहरू इच्छुक रहेको बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ २१:३७
बेलायती राजकुमार चार्ल्स सेल्फ आइसोलेसनबाट बाहिर आए
लन्डनमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकको अनुभव : ‘स्थिति भयावह देखिन्छ’
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाखमा सीमित राख्‍न सके निकै राम्रो : ट्रम्प
बेलायतमा किन अनियन्त्रित भयो कोरोना ?
ट्रम्प पछि हटे, अमेरिकामा अप्रिल अन्त्यसम्म कडाई
जापानी कमेडियन केन शिमुराको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु